Ukukhusela isoftware nabaThengi kubenzi bobubi? | Martech Zone
Ukukhusela isoftware nabaThengi kubenzi bobubi?
NgoLwesithathu, Oktobha 4, 2006 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngokuqinisekileyo yenye yezona zinto zibuhlungu endakhe ndazifunda kwiSoftware Piracy!
Funda iNqaku: Iqonga lokuKhusela iSoftware likaMicrosoft. Oku kubi njengoMthetho wePatriot! (AKA: Kufuneka siyikhusele inkululeko yakho, kwaye uya kuba nguzwilakhe xa unikezela ngenkululeko yakho ukuze sikhusele inkululeko yakho.. Huh?). UMicrosoft bekufanele ukuba wenze le memo yangaphakathi:
Iplatfomu yokuKhusela uNzuzo kaMicrosoft: Ukugcina iiSoftware zibiza kakhulu kunye neNzuzo ngophahla!
Ndiyakholelwa ngokuqinileyo ukuba uninzi lwabantu luya kuba kuphela xa kunyanzelekile. Ngokuqinisekileyo, baninzi abantu abaza kubamba i-heck yayo-kodwa andicingi ukuba uninzi. Ndicinga ukuba ndithethela abantu abaninzi xa ndisithi iMicrosoft Software IS kubiza. Kananjalo, andikaze ndilindele nanini ukufumana inkxaso. Kwaye-ndiyazi ukuba kufuneka ndixhomekeke kuhlaziyo ukugcina isoftware isebenza. Kwaye-ndiyazi ukuba kufuneka ndithenge kwaye ndifake enye isoftware ukukhusela isoftware yam yeMicrosoft kuhlaselo olubi.
Igama 'umgunyathi' ayililo igama elichanekileyo. Isoftware ayisiyonyani… iibhokisi kunye neeCD zisenokuba… kodwa isoftware yeyona software kaMicrosoft. Ukulwa nesoftware ekhutshelwe ngokungekho semthethweni kunye nayo NOT khusela isoftware kwaye ayikhuseli abathengi. Abathengi abathanda imveliso yakho baya kuhlala bekulungele ukuhlawula loo mveliso. (Ndihlawule i-XP kunye ne-Office XP)
Kuyamangalisa ukungazi kunye nokukrokra ukuba iMicrosoft ikhuphe inqaku elinjeya. Ngaba ukhona umntu okholelwa ukuba lo ngumyalezo onyanisekileyo? Le yingxaki yokuThengisa namhlanje, abantu abayikholelwa kuba ayikholwanga.
IAjax, DOM, RSS, XHTML, SOAP… zonke ezo zinto! Kulula kunokuba ucinga!
Oktobha 4, 2006 ngo-12: 22 PM
"Ndiyakholelwa ngokuqinileyo ukuba uninzi lwabantu luza kuphela xa kufuneka lenze njalo."
Ndiyafuna ukukukholelwa. Ndifuna kakhulu ukukholelwa ukuba izonka ezibiweyo zihamba kuphela zondla usapho olulambileyo lwesela. Ndifuna kakhulu ukuba inyani…
Kodwa, ngalo mhla nakweli xesha ndikholelwa ukuba isoftware, isoftware yakhe nabani na, ibonwa kwimiboniso yeglasi yokutshaya yeminyaka yokuqala yeMicrosoft yeWindows 3.yinto ethile… AKUKHO ukukopa oko kwakulungile (!!!) kodwa endaweni yokuba iMicrosoft ingakwenzi oko "Kubonakala ngathi ayikhathali" ukukopa. (Ayinyani kwaphela kodwa yayiyimbono leyo.)
Andikholelwa ukuba uJoe Umndilili uyakwazi ukwahlula ngokucacileyo phakathi kokusebenza nzima kweenkqubo ezikhethiweyo, ukuzama ukufumana indlela yokuphila, kunye ne-mega-shishini-ii-monoliths ezizama nje ukubiza ixabiso elifanelekileyo kwimveliso yazo. Kananjalo akukho nto ixhalabisayo kwicala likaJoe ukuba yeyiphi isoftware ayisebenzisayo “ngendlela esemthethweni okanye engekho semthethweni.
Lo ngumcimbi wokuqonda kunye nokungahambi kakuhle kuloo nto. Kuya kufuneka sihlawule yonke inkqubo esiyisebenzisayo. Andikholelwa nje ukuba uJoe Umndilili ugcina umbono omnye.
Uxolo… nje $ 0.02 wam
Oktobha 4, 2006 ngo-1: 38 PM
Akukho mfuneko yokuxolisa, William! Ndicinga ukuba sisondele kwisivumelwano kunokuba ucinga.
Ndicinga ukuba ingxoxo-mpikiswano kufanelekile ukuba ixoxwe. Ngaba ubuqhetseba buyanceda inkampani ngokuhambisa isoftware ngokufanelekileyo? Ndiqinisekile iyabenzela abanye.
Mhlawumbi andinalwazi lokucinga ukuba abantu baya kuhlawula kuba ndihlawula isoftware. Ndimele ndivume ukuba ndisebenzise isoftware epiriziweyo kwaye emva koko ndayihlawula kamva. Ngamanye amaxesha ityala lilinganiselwe kwaye bendingaqinisekanga ukuba kufanelekile ngemali.
Kwintliziyo yam yeentliziyo ndiyakholelwa ukuba ukubonelela kunye nokufuna amaxabiso olawulo. Ngokuthintela kunye nokuthintela oko ngolawulo olunyanzela umntu ukuba athenge, ndicinga ukuba ucela abantu ukuba bebe endaweni yoko.
Ixabisa malini iWindows? $ 400? $ 100? $ 10 / mo? Kutheni le nto ixabisa imali ngakumbi kwikhompyuter entsha (i-OEM) endaweni yekhompyuter ephuculweyo? Ndicinga ukuba ulwakhiwo lwamaxabiso alunampazamo, kwaye iMicrosoft yonyusa ukuchitha LOT yemali kwiPiracy endaweni yokwenza isoftware yabo ifikeleleke ngakumbi.
Oktobha 5, 2006 ngo-8: 56 PM
Bendinethemba lokuba abanye bazakuzibandakanya noloyiko apha… kodwa yeha… ndilungiselele impendulo yobude obuthile kwaye ndathumela efanayo kwi Ukuphendula uDoug Karr…